Ọ bụrụ na ị na-aga ebe a na-eme egwuregwu ski (ihe anyị na-ewere na ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị na egwuregwu ọcha dị ka anyị), ị ga-amara na nke ọ bụla nkọwa ya na akụkụ ya bụ nke a na-ewu n'ụzọ doro anya iji kwe nkwa ọrụ na uru nke oghere. Nke a, n'ezie, dị mkpa n'ịtụle nnukwu nnabata nke ndị na-ejedebe ebe ahụ na mkpa nhazi. Anyị na-adịbeghị anya hụrụ na otu isiokwu ihe ebe ntụrụndụ ski kacha maa mma, ma n'isiokwu taa, anyị chọrọ itinye pụrụ iche mesiri ike na ije, na-ebuli creativity na nkà nke oké ndị na-emepụta na architects ndị jisiri ike aesthetically n'otu ọ bụla element na-mere ndị a ụlọ, ma na njem nleta ogige ma na onwe obibi.
IHE NDỊ DỊKỊRỊ NKE NKE EBE EBE EWU N'ỤWA
Ebe na enyemaka
Ọ bụghị ihe ijuanya na ihe mbụ na-abata n'uche bụ na ebe ntụrụndụ ski nwere a okwu mgbagwoju anya. Ihe dị n'okike bụ ịchọta ụlọ ọrụ dị n'okpuru egwu egwu ahụ, ebe anyị nwere ekele maka ala dị larịị. N'ebe a, owuwu nke ụlọ na-agụnyekarị obere mgbanwe na mbara ala, ebe ọ bụ na elu adịghị enwe mkpọda ugwu. Ma n'ime akụkọ a, ị ga-ahụ na e nwere ọdụ ụgbọ mmiri ndị, ọbụlagodi na-enweghị nnukwu oghere dị larịị nke a ga-ewu, na-achọghị ịhapụ ohere iji wuo (ọ bụrụgodị na nke ahụ pụtara na ụlọ ahụ a na-ekwu bụ n'ezie agbakwunyere n'akụkụ nke ụlọ). ugwu dika crustacean ga). Ya mere, ala ahụ bụ ihe dị mkpa iburu n'uche na nhazi ụlọ ebe a na-eme egwuregwu ski, ọ bụghịkwa mgbe niile ka ị na-enwe "akwa akwa" ahụ nke ị ga-ewu.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ sonido. Ebe a na-eme egwuregwu ski, na-enweghị n'ime akụkụ ma ọ bụ tụọ ike ya iji nweta ski, na-abụkarị ebe dị jụụ n'ihi ihe nke snow. Dị ka anyị hụrụ na isiokwu site snowMgbe a na-ekpuchi flakes ahụ n'elu ibe ha n'elu ụwa (nke bụ ihe na-eme na ebe ntụrụndụ ski), a na-emepụta "nkịta" nke na-eme ka mkpọtụ ahụ kwụsị. Gịnịzi ka onye skier na-achọ mgbe ọ mabachara ntị ya na ịgbachi nkịtị ahụ? Ọfọn, enweghị mkpọtụ, anyị agwala gị. Mgbe ị na-abanye n'ime oghere a na-emechi emechi, ọtụtụ ndị na-emepụta oghere ndị a na-eji ihe na-eme ụda, sofas na oche ndị na-ekpuchi elu ma ọ bụ na-eji kapet kpuchie ala n'ime ụlọ. N'ụzọ dị otú a, a na-ejikwa ụzụ na-ada ụda mgbe nile nke skis na-akụda, nzọụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ihe ndị yiri ka anyị maara nke ọma ozugbo oge ahụ malitere.
Ngwa ndị na-eguzogide
Nhọrọ nke ihe iji chepụta n'ime oghere ndị a na-eburukwa n'uche na eyi mgbe niile site na ebe a na-ahụkarị, karịsịa n'ebe ndị dị ka ebe nchịkọta ihe ma ọ bụ ime ụlọ na-agbanwe. Ọ bụ maka ịdị n'otu aesthetics na ịdị irè, na-eme ka akụkụ ụfọdụ nke a na-atụ anya ịkụ ọkpọ mgbe niile n'ihi ihe anyị na-eji ski.
N'ikpeazụ, anyị enweghị ike ichefu otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị ga-eburu n'uche na ime ime ụlọ ndị a: na ọkụ. Ma anyị na-ahụ a anwụ na-acha ma ọ bụ urukpuru ụbọchị, snow na-eme ka rebound mmetụta na ìhè; n'ihi ya, ha na-abụkarị ebe oyi na-atụ ga-emeri karịa agba ọkụ. Kedu ihe nke a pụtara? Na n'ozuzu mgbe ski, anyị na-accustom anya anyị ka a ọzọ strident na wuru ọkụ ike (oyi ụda) karịa na-eje ije gburugburu obodo (ọkụ ụda) na, ọ bụ ezie na anyị na-elekọta anya anyị ekele maka oké àgwà nke máscaras de esquí de UllerỊbịarute ụlọ ọrụ mechiri emechi enweghị ike ịgwụ ike karịa ka mpụta na-emebu. N'ụzọ dị otú a, anyị na-achọkarị ọkụ ọkụ n'ime ime nke anya anyị na-ezu ike mgbe ogologo ụbọchị nke ski, ma na-echefughị ​​iji ohere nke echiche ndị a na-enwekarị n'ụdị ọdịdị ala a.
ỤFỌDỤ N'ime Ụlọ Nwunye Ugwu Kasị Mma
Mgbe ha hụchara isi ihe ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ na ndị na-emepụta ihe na-ele anya mgbe ha na-emepụta ọdụ ụgbọ mmiri na oghere dị iche iche, ka anyị hụ otú ha si egwuri egwu na ihe ndị a n'ezie ihe atụ nke ihe owuwu n'elu ugwu.
"CHESA FUTURA", BY NORMAN FOSTER
Ọrụ ụkpụrụ ụlọ a dị na St. Moritz, ogige njem nlegharị anya na Ndagwurugwu Switzerland Engadine. Ọ bụ ụlọ dịtụ iche na nke Norman Foster jiri meere anyị. Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Britain a ma ama haziri ya na 2000 mana ewubeghị ya ruo afọ anọ ka e mesịrị, ọ na-ejere ya na ezinụlọ ya ozi dị ka ebe obibi nke onwe n'oge ọrịa Covid-19. Ọ bụghị naanị na atụmatụ ndị dị ịtụnanya n'ezie, kamakwa echiche nke ọdụ ụgbọ.
Innsbruk bụ obodo Austrian ebe onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Iraq bụ Zaha Hadid kpebiri iwu ụlọ ahụ a maara dị ka “Bergisel Ski Jump” n'etiti 1999 na 2002. Nke a na-awụlikwa elu ski dị na ugwu Bergisel, wee guzobe akụkụ nke oru ngo iji rụkwaa ụlọ ahụ. Ụlọ ọrụ Olympic, dochie nke gara aga nke e wuru na 1927 na nke na-emezughị ọnọdụ ndị dị mkpa. Ọ nwere ngwakọta nke ụlọ elu na akwa mmiri, nke nwere mgbada 90-mita n'ụdị rampụ. N'ọtụtụ oghere, ụlọ a nwere echiche na mpaghara ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke ndị njem nleta nwere ike ịnụ ụtọ echiche dị ịtụnanya. A na-eji ya ugbu a dị ka ebe nzukọ egwuregwu na ebe ndị njem nlegharị anya.
" BACHLEDKA SUMMIT FACILITIES", SITE COMPASS ARCHITEKTI
Enyere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ Compass Architekti iwu ka o wuo ụlọ a mara mma na Bachledova Dolina, Slovakia, na 2019. Ọ ghọọla otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke mgbanwe na mbara ala, na-enweta ihe ruru 6000 ọbịa kwa ụbọchị. Dị ka otu ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ si kwuo, ọ bụ ụlọ dị n'akụkụ ugwu, naanị ihe a na-ahụ anya bụ ugegbe. Nke a na-enye ohere ka ọkụ dị egwu banye n'ime ime oghere ahụ, ma na-eme ka ndị ọbịa niile nwee mmasị.
Mkpọda SKI: Ụlọ kacha mma n'ụwa
Ka ị na-anụ ya! Ihe nrite maka ụlọ kacha mma n'ụwa nke 2021, dị ka World Architecture Festival si kwuo, bụ ebe a na-emegharị ihe na ntụrụndụ na Copenhagen (Denmark) nke nwere mkpọda ahịhịa skị sịntetik, na mgbakwunye na nhọrọ ntụrụndụ ndị ọzọ dị ka mgbidi ịrị elu. , ebe crossfit na ụzọ njem. Emebere ya site na ụlọ ọrụ ụkpụrụ ụlọ a na-akpọ Ụlọ ọrụ Bjarke Ingels Groupin, ma ewepụtara ya na 2017, dochie ụlọ ọrụ incineration ochie.
Kedu ihe bụ isi ihe ị ga-eburu n'uche iji chepụta ebe ezumike ski?
ZAHA HADID echekwala ebe ezumike SKI?
Ụlọ ihe owuwu nke Zaha Hadid abụghị onye na-ahụ maka imepụta ebe egwuregwu ski, mana ọ bụ ogige njem nlegharị anya na egwuregwu na 1999 nke puku kwuru puku na puku ndị ọbịa na-anụ ụtọ kwa afọ. Ọ bụ ụlọ na-anata aha "Bergisel Ski Jump" ma dị n'ugwu Bergisel, dị ka aha ya na-egosi, na Austria. Ọrụ ihe owuwu a enwetawo amara ya karịa ihe niile maka mkpọda nke mita 90 n'ogologo na ogo 35 nke na-egosi mgbada site n'elu ruo n'ala ala ugwu ahụ. Ọ bụ kpọmkwem n'elu ụlọ ahụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ echiche nke echiche ya ga-eme ka ị na-atụ egwu.
GỊNỊ bụ ụlọ kacha mma n'ụwa?
WAF (World Architecture Festival) enyela ebe egwuregwu ski dị ka ụlọ kacha mma n'ụwa n'afọ 2021. Ọ bụ ụlọ a na-akpọ Copenhill, ọ bụkwa ebe a na-emegharị ihe yana ebe ntụrụndụ, nke gụnyere ebe mkpọda ski. mgbidi ịrị elu, ụzọ njem, wdg. Enyerela ya, ọ bụghị naanị maka ọrụ gburugburu ebe obibi dị ka ihe nnọchianya nke ọgụ megide mgbanwe ihu igwe, kamakwa maka ọrụ mmekọrịta ọha na eze na egwuregwu.
Nwa Ushuaia Black / Green
Nye ọnụahịa6000 € 60.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 125
Vetikal Mint / isi awọ
Vetikal Mint / Nwa